अल्बर्टसन बन्डहरू, छोटो अवधि, उच्च उपज, निश्चित आय लगानी, ield% वाइटीएम उपज - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी २ बी मार्केटप्लेस समाचार
अल्बर्टसन बन्डहरू, छोटो अवधि, उच्च उपज, निश्चित आय लगानी, 8% YTM उत्पादन
नोभेम्बर 9, 2019 नोभेम्बर 8, 2019 डोका कुकुरहरू ब्लग, बन्धन, व्यापार, कर्पोरेट बन्धन, डिविडेंड एरिस्टोक्राट्स, डोका कुकुरहरू, S&P 500 - २०२० को कुकुरहरू, विशेष समाचार, स्थिर आय, आय अरिस्टोक्राट्स, निवेश
एक वर्ष अघि $ 294.8 मिलियन घाटाको तुलनामा कुल आय $ २ 32.4 ..XNUMX मिलियन छ।
समायोजित EBITDA 3.5.।% ले वृद्धि भयो।
आर्थिक वर्ष २०१ For को लागि कम्पनीले debtण १.2019 बिलियन घटाएको छ।
Q2 को लागी, कुल शुद्ध debtण समायोजित EBITDA अनुपात २.2.9x मा घट्यो
अल्बर्टसनको interest.२x को राम्रो ब्याज कभरेज छ।
यस हप्ता, डुरिगले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नम्बर दुई किरानामा अर्को नियाल लिन्छन्। 2015 को शुरुमा Safeway स्टोरहरू खरीद गरेको पछि अलबर्टसनले विगत केही वर्षहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। यसको सब भन्दा भर्खरको त्रैमासिक परिणामको साथ, कम्पनीले अब लगातार सात क्वार्टरमा समान स्टोर बिक्री बृद्धि गरेको छ। थप रूपमा, कम्पनीको अनलाइन किराना बिक्री 40% द्वारा वर्ष बर्ष बढ्यो, यो परम्परागत ईंट र मोर्टार खुद्रा विक्रेताको लागि ठूलो जीत। (यसको Q2 परिणामबाट अन्य परिणामहरू, माथि बुलेटहरू हेर्नुहोस्)
निस्सन्देह लगानीकर्ताको विश्वबाट सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आउँदछ कि कहिले अल्बर्टसन सार्वजनिक हुन सक्छ विशेष गरी यसको भर्खरको सफलताको ofण कटौती सहितको सफलतालाई। अल्बर्टसनको निजी इक्विटी ब्याकर, सेर्बेरस क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, किराने फुटकर बिक्री को लागी आफ्नो योजना को बारे मा कुनै पनी टिप्पणी गरीएको छैन। तर यो तथ्यलाई लिएर कि अल्बर्टसनले २०१ 2018 को रूपमा सार्वजनिक हुन खोजेको छ, अर्को प्रयास सम्भव छ। अल्बर्टसन प्रतिस्पर्धी स्थिति र ई - वाणिज्य ठाउँको आक्रामक खोजीलाई ध्यानमा राख्दै, यी २०2028 बन्डहरू, प्रतिस्पर्धी उपज-परिपक्वता disc% को लागि छुट भएका दुर्गको उत्कृष्ट उत्कृष्ट बनाउँदछन्। निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो, को एकत्रीकृत प्रदर्शन को तल देखाइएको छ।
एल्बर्टसन कम्पनीहरू दोस्रो क्वाटर परिणाम
अल्बर्टसनले यसको सातौं लगातार क्वाटरमा एक समान स्टोर बिक्री बृद्धिको रिपोर्ट गरेको छ। वित्तीय परिणाम २०१। (सेप्टेम्बर 2019, २०१, मा समाप्त भएको तीन महिना) को दोस्रो क्वाटरमा यसको नतीजा, समान स्टोर बिक्री बृद्धिको २.7% ले बृद्धि गरेको वर्षको तुलनामा। क्वार्टरका अन्य हाइलाइटहरूले निम्न समावेश गरे:
क्यू २ शुद्ध आय Q २2.294.8. million मिलियन थियो, क्यु २ 32.4 २०१ in मा loss .2२. million मिलियनको शुद्ध घाटाको तुलनामा।
समायोजित EBITDA 3.5.%% ले $$$..567.6 मिलियन डलरमा वृद्धि भयो।
कूल नाफा मार्जिन २.27.8..27.2% मा बढेको छ, २०१२ Q2 को अवधिमा २.2018.२% को तुलनामा।
आर्थिक वर्ष २० 28 of को पहिलो २ weeks हप्ताका लागि अपरेटिंग गतिविधिहरूद्वारा उपलब्ध नगद १.१ बिलियन डलर थियो।
वित्तीय वर्ष २०१ for को लागि आजसम्म अल्बर्टसन कम्पनीहरूले यसको debtण १. billion अरब डलरले घटाएको छ। नतिजाको रूपमा, कम्पनीको कुल शुद्ध debtण समायोजित EBITDA अनुपात २. 2019.x मा घट्यो।
"व्यापारको मजबुत गति दोस्रो क्वाटरमा पनि जारी रहेको छ," अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी विवेक शंकरनले भने। "हाम्रो उस्तै बिक्री लगातार सातौं त्रैमासिकका लागि सकारात्मक थियो र हामीले हाम्रा ग्राहकहरूको लागि किनमेलको अनुभवलाई बढाउने क्रम जारी राख्दै तीन बर्षमा हाम्रो सबैभन्दा शक्तिशाली उस्तै प्रदर्शन प्रदर्शन प्रतिनिधित्व गर्‍यौं। हामी उत्कृष्ट स्टोरहरू सञ्चालन गरेर, हाम्रो वफादार ग्राहक आधार बढाउँदै, ईकॉमर्समा जित्दै, र आफ्नै ब्रान्ड पोर्टफोलियो बढाउँदै बिक्री बृद्धिमा केन्द्रित छौं। ”
अल्बर्टसन कम्पनीहरू संयुक्त राज्यको सबैभन्दा ठूलो खाद्य र औषधि खुद्रा बिक्रेता मध्ये एक हो, दुबै कडा स्थानीय उपस्थिति र राष्ट्रिय मापदण्डको साथ। कम्पनीले २ 2,262२२ स्टोरहरू 35 20 राज्यमा फैलाएको छ र साथसाथै वाशिंगटन डीसी। २० कम्पनीले अल्बर्टसन, सेफवे, भन्स, ज्वेल-ओस्को, शाज, एक्मे, टम थम्ब, रान्डल्स, युनाइटेड सुपरमार्केट, प्याभिलियन्स, स्टार मार्केटलगायत २० प्रख्यात ब्यानरहरू अन्तर्गत काम गर्दछ। , Haggen र Carrs। अल्बर्टसन कम्पनीहरूले करीव २273,000,००० मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छन् र week 34 लाख ग्राहकहरू प्रत्येक हप्ता सेवा गर्दछन्। अल्बर्टसनलाई न्यूयोर्कमा आधारित सर्बेरस क्यापिटल प्रबन्धन, एक निजी इक्विटी फर्म द्वारा समर्थित छ। कम्पनीले बोइज इडाहो, फिनिक्स एरिजोना र प्लाइसनटन क्यालिफोर्नियामा कर्पोरेट स्थानहरू मर्मत गर्छ।
अनलाइन किरानामा प्रचलनहरू
अनलाइन किराना ठाउँ तातो भइरहेको छ। जहाँ ठूला अनलाइन रिटेलरहरूले स्पेसमाथि प्रभुत्व जमाउन प्रयास गरिरहेछन्, वालमार्ट, टारगेटका साथै पारम्परिक किराने खुद्रा विक्रेताहरू पछाडि लडिरहेका छन्।
२०१ In मा अमेरिकी खाना र पेय पदार्थ ई-वाणिज्य बिक्री १ 2019.२% ले बढेर १ .18.2 ..19.89 2021 अर्ब डलर पुगेको अनुमान छ। २०२१ सम्ममा त्यो आंकडा $$.१38.16 अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ।
अल्बर्टसनले आफ्नो अनलाइन किराना बिक्री बढाउन जारी राख्यो। वास्तवमा, यसको सबैभन्दा पछिल्लो क्वार्टरमा, अनलाइन किराना बिक्री 40०% वर्ष बर्ष माथि थियो। यसको अनलाइन किराना सेवा बृद्धि गर्नु कम्पनीको चार इन्जिनहरू मध्ये एक हो जसलाई कम्पनीको सबैभन्दा पछिल्लो आय कलमा पहिचान गरिएको छ।
अल्बर्टसन ग्रोथका चार इन्जिनहरू
अल्बर्टसनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विवेक शंकरनले कम्पनीले अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको बृद्धिका चार पक्षहरूलाई रेखांकित गरे - अनलाइन बिक्री, वफादारी कार्यक्रम, स्टोरहरू, र निजी लेबल। अनलाइन किरानाको सम्बन्धमा, कम्पनीले गरेको हालसालै गरिएको एउटा अध्ययनले स online्केत गर्यो कि अनलाइन खरीद गर्ने ग्राहकहरूले अनलाइन खरीद नगर्नेहरूको तुलनामा बढी खर्च गर्छन्। यसमा क्यापिटलाइज गर्नका लागि कम्पनीले आफ्नो वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनलाई बृद्धि गर्ने कार्य दुबै सुविधाजनक र प्रयोगकर्ता मैत्री छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न जारी राख्छ।
स्टोरहरू र वफादारी कार्यक्रमहरूले पनि विकासको लागि योगदान गर्न अपेक्षा गर्दछ। स्टोरमा ग्राहकको अनुभवमा ध्यान केन्द्रित गर्नु एक प्रमुख बृद्धि ड्राइभर हो। लक्ष्य भनेको ग्राहकको लागि शपिंगको सुविधा प्रदान गर्नु हो। यसले विभिन्न किरानेका आईटमहरू छनौट गर्नका साथै विस्तारित आत्म-चेकआउट समावेश गर्दछ। अल्बर्ट्सन वफादारी कार्यक्रम, "यू को लागी" दोस्रो क्वार्टरमा शपर खरीद दर्ता २ 24% ले बृद्धि भएको देख्यो। यो वफादारी कार्यक्रम कम्पनी आफ्नो ग्राहकहरु मा मूल्यवान डेटा प्रदान गर्दछ, जो बदले मार्केटिंग र व्यापार प्रयास बढाउन मद्दत गर्दछ। वफादार ग्राहकहरू स्टोर मा अधिक पैसा खर्च गर्न प्रेरित छन्।
ब्याज कभरेज बोन्डोल्डर / लगानीकर्तालाई जारीकर्ताको आफ्नो अवस्थित debtण स्तर सेवाको क्षमता बताउँछ। उच्च ब्याज कभरेज अनुकूल छ। सेप्टेम्बर,, २०१ ing मा अन्त्य हुने बाह्र हप्ताहरूमा अल्बर्टसन कम्पनीहरूको operating$२..7 मिलियन डलरको ब्याज खर्च र interest १2019..582.4 मिलियनको ब्याज खर्च 177.5..२x को स्वस्थ ब्याज कभरेज अनुपातको लागि थियो।
तरलताको हिसाबले, सेप्टेम्बर,, २०१ of सम्ममा कम्पनीसँग नगद र cash7 मिलियन डलर बराबर थियो। साथै, कम्पनीसँग यसको सम्पत्ति आधारित घुम्ने facilityण सुविधामा सेप्टेम्बर,, २०१ 2019 सम्ममा $ 435 billion अर्ब डलर उपलब्ध थियो।
अल्बर्टसन बन्डमा अपडेटहरू प्राप्त गर्न तल दर्ता गर्नुहोस् र अधिक!
बोन्डधारकहरूको लागि जोखिम भनेको किराना र अनलाइन किराना स्थानमा प्रतिस्पर्धी रहनको लागि अल्बर्ट्सन क्षमता हो। केही वर्ष पहिले सम्पूर्ण फूड्सको अधिग्रहण पछि अमेजनले किरानेको ठाउँ ओगट्ने डरको बावजुद त्यो डर वास्तवमै साकार भएको छैन। र अल्बर्टसनले आफ्नो अनलाइन किराना बिक्रीमा राम्रो प्रगति गरिरहेको छ, सबैभन्दा पछिल्लो क्वाटरमा %०% वर्ष-ओभर-वर्ष। अल्बर्टसनले पनि किराना अन्तरिक्ष मा एक प्रमुख उपस्थिति राख्दछ, देश को दोस्रो सबैभन्दा ठूलो किराना विक्रेता को रूप मा।
सामान्यतया डुरिगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको जोखिम कम हुन्छ निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो धेरै ondsणपत्र र उद्योगहरूमा यसको विविधीकरणको कारणले गर्दा, व्यक्तिगत बन्डहरूको खरीदको तुलनामा। ऐतिहासिक रूपमा, एफएक्स २ पोर्टफोलियोले पोर्टफोलियोको तुलनामा उल्लेखनीय प्रदर्शन गरेको छ जहाँ लगानीकर्ताहरूले व्यक्तिगत रूपमा बन्डहरू छान्छन्। डुरिग क्यापिटलले हाल यस बन्धनलाई यसको FX2 पोर्टफोलियोमा समात्दछ।
अल्बर्टसनले प्रदर्शन गर्न जारी रह्यो, यसको समान स्टोर बिक्री लाभको सातौं लगातार क्वाटरमा लग गर्दै। अनलाइन किराना बिक्री Q40 मा %०% वर्ष-ओभर-वर्ष बृद्धि भएको थियो, Q2 मा% 33%-वर्ष-बर्षको वृद्धिको पछि। यद्यपि अमेजन किरानेको ठाउँमा बढेको हुन सक्छ, अझै धेरै उपभोक्ताहरू छन् जसले अनलाइन शपिंगको सुविधालाई मन पराउँछन् उनीहरूको स्थानीय स्टोरबाट उत्पादन पाउँदै। अल्बर्टसनसँग यसका वफादार ग्राहकहरूको लागि दुबै उत्तम छ जस्तो देखिन्छ। थप रूपमा, कम्पनीले debtण घटाउने जारी राख्दछ जबकि बढ्दो समायोजित EBITDA। अल्बर्टसन २०२1 बन्ड एक छुट मा व्यापार गर्दै छन्, उनीहरु लाई एक धेरै प्रतिस्पर्धी उपज-परिपक्वता को बारे मा 2028% को प्रदान। यी बॉन्डहरूले लगानीकर्तालाई उनीहरूको पोर्टफोलिओमा आवश्यक किराना उद्योग समावेश गर्न खोज्नेहरूको लागि विविधता प्रदान गर्दछ। अल्बर्टसनको प्रकाशमा ठोस प्रदर्शन जारी राख्यो, यी बन्धनहरूले दुर्गको लागि उत्कृष्ट थप गर्दछ निश्चित आय2(FX2) उच्च उपज प्रबन्धित आय पोर्टफोलियो.
जारीकर्ता: अल्बर्टसन इंक।
परिपक्वता: 02 / 23 / 2028
रेटिंग्स: B +
भुक्तानी गर्दछ: Semiannally
परिपक्वता उत्पादन: ~ 8.11%
प्रकटीकरण: डुरिग क्यापिटल र केही ग्राहकहरूले एल्बर्टसन फेब्रुअरी २०२। बॉन्डमा पदहरू लिन सक्दछन्।
2019 Albertsons बन्धन बन्ड अनुसन्धान बन्ड समीक्षा बन्धन ईंट र मोर्टार सर्बेरस पूंजीगत व्यवस्थापन cn सांप्रदायिक समाचार उपभोक्ता उपभोक्ताहरु डुरिग स्थिर आय निश्चित आय लगानी किराना किराना किनमेल किराना पसल धेरै उब्जनी उच्च उपज बांडहरू उच्च उपज निश्चित आय उच्च उपज लगानी अनुसन्धान निवेश जंक बन्धन अनलाइन अनलाइन किनमेल पोर्टल्याण्ड अनुसन्धान फुटकर समीक्षा संस्कार सहायता बिक्री किनमेल छोटो समय छोटो अवधि का बन्धन संयुक्त राज्य अमेरिका
एनबीए पश्चिमी सम्मेलन: कुन टोलीले राम्रो मौसम शुरू गरे?
W तरिकाहरू यो क्लाउडमा ब्याकअप सार्न भुक्तान गर्दछ